Ungayixelela njani ukuba intombazana eneentloni iyakuthanda-Iingcebiso zokudlala ngothando | Amadoda aQinisekileyo
Ungayixelela njani ukuba intombazana eneentloni iyakuthanda
UAlicia tomero | | Isibini kunye nokwabelana ngesondo
Siyithanda nyhani intombazana, sifuna ukuyazi, sazi yonke into eyithandayo nendlela eziphatha ngayoKodwa siyazi ukuba ezantsi unentloni. Nibe ngabahlobo kwaye yintoni encinci ukuba zonke iinkxalabo zakho malunga nothando kuye zabelwane ngendlela efanayo nangendlela. Ezantsi ubonakala engenazigqibo, ngenxa yesimilo sakhe, ngenxa yobuntu bakhe kwaye awazi ukuba naluphi na uphawu lubonisa umfanekiso wokhuseleko oziva kanjalo
Ngokwesiqhelo amantombazana aneentloni, ngokunikwa ubuntu babo, baye bangabikho kwabanye Kungenxa yoko le nto banokunika imiqondiso embalwa yokuziva benomdla kwinkwenkwe ethile. Oku akuthethi ukuba abaziva, kodwa ngokuchaseneyo. Ngendlela efanayo, uya kufuna ukuphonononga yonke into enxulumene nothando, Uya kufuna ukucinga kwaye ubonise ukuzithemba kwakho, kodwa ewe, kwisantya sakho.
1 Kuthekani ngentombazana eneentloni?
2 Isayina intombazana eneentloni iyakuthanda
Kuthekani ngentombazana eneentloni?
Xa singena kuhambo lothando, iikhonsepthi ezininzi zinokudideka. Akukho lula konke konke ukwahlula imiqondiso abanokuyithumela abanye abantu basetyhini, kuba Sifakwe kwi-halo yothando. Ngendlela efanayo, ukuba kubonakala kunzima kuthi ukuba kunyanzelekile ukutolika le miqondiso, Iya kuba ngakumbi ngakumbi xa umntu wasetyhini eneentloni.
Iintloni kuphela sisithintelo esibabeka bodwa, kodwa ngaphakathi kubo kukho ilizwe elibakhathazayo. Inokugcina ngaphakathi kubo umfazi onengqondo onesakhono esikhulu sothando. Nje ukuba baseke iibhondi zemanyano ubudlelwane buya kuba namandla kakhulu, ukusukela ukhetho lwenziwe kancinci kancinci ngexesha lenkqubo.
Olu hlobo lwentombazana luyonyusa imo yakhe xa efumanisa kwimeko-bume yakhe amanye amantombazana eyahlula ubuntu bakhe. Baninzi abafana abafuna amakhosikazi aphumayo ngakumbi, amatheko amaninzi, ngaphandle kweentloni nokuzonwabisa. Le nyaniso ibenza ukuba bashenxise kolu hlobo lweenkolelo, kodwa akufuneki silibale ukuba ngaphakathi kubo kukho umhlaba omkhulu wangaphakathi. Ukuba ke ngoko bangabafazi abahle ngokwasemzimbeni, sinokuba nazo zonke ezona mpawu zibalaseleyo komnye.
Isayina intombazana eneentloni iyakuthanda
Ukuba uyayithanda intombazana eneentloni, kuya kufuneka uqiniseke kwaye ufumanise ukuba unomdla kuwe okanye akunjalo. Oku kubaluleke kakhulu ukuze wonge ixesha elininzi kunye namandla onokuthi usebenze ukuba uyintombazana engeyiyo:
Inkangeleko yeyona nto iphambili. Nabuphi na ubudlelwane ukudibana kwamehlo kuba yeyona nto ibalulekileyo. Kuya kufuneka uyazi ukuba ulutolika njani olu hlobo lokujonga, njengomgaqo ngokubanzi ubanjwa ixesha elide kunesiqhelo phakathi kwamaqela omabini. Kwintombazana eneentloni ukujongana kwamehlo kuya kwahluka ngakumbi, Ngokuqinisekileyo uya kuyibona kangangezihlandlo ezimbalwa kwaye akayi kukucaphukisa nawe. Kokunye kokujonga kwakhe, unokujonga kude kakhulu kunesiqhelo kwaye kulapho uyakuyibona khona loo nto abafundi bakhe bayathanjiswa, iya kuba nokuqaqamba okukhethekileyo emehlweni akho.
Uhlala esondele. Ukuba ukwimo yepati, ngokuqinisekileyo uyakuqaphela ubukho babo kufutshane nawe rhoqo. Unaye engqondweni yakhe ukuze ukwazi nokujonga indawo emzimbeni wakhe. Uyakuqaphela ukuba umzimba wakhe, iingalo kunye nemilenze iya kuhlala ijikelezwe kule ndawo ukuyo, Nentloko yakhe iya kujinga apho ukhona, nokuba uyathetha nabanye abantu.
Ukudlala ngothando ngomzimba wakhe. Ngokuqinisekileyo ayisiyonto iqhelekileyo aqhele ukuyenza kwaye endaweni yoko uyenza nawe. Bakholelwa ukuba kwasekuqaleni baphulukene nayo yonke le nto kunye nokuziphatha banokufumanisa ukuba ukudlala ngothando kwakho kunokwenzeka. Uya kuhlala ezama ukulungisa iimpahla zakhe kwaye enze izijekulo ezincinci njengokuphulula iinwele zakhe. Iya kuba yindlela yakhe yokudlala ngothando.
Uncumo lolunye lweyona miqondiso mihle. Nawuphi na umfazi ophakathi kwincoko angancuma njengomthetho, nangaphezulu ukuba uphakathi kweqela labantu. Ukuba unomdla wokwenene kuwe izakubeka ukubekeka esweni ngakumbi nasiphi isenzo somzimba osenzayo kwaye uya kuncuma kuyo nayiphi na into oyenzayo, ingqalelo ngakumbi. Ukuba ungumntu othanda ukuthetha iziqhulo nokuqhula ungaqaphela ukuba ezinye zezimvo zakho, ebezingahlekisi, ziye zababekwa ngendlela eyahlukileyo nebaxekileyo. Oku kuyafana nokuba nomdla kuwe.
Uhlala ekunceda kwaye ekuchukumisa. Uluncedo kwaye ubonakalisa owona mnqweno wakhe wokubonelela ngokukunceda xa ufuna naluphi na uhlobo lwentuthuzelo kwindawo okuyo. Yindlela yokufuna ukukhangela ixesha elininzi kunye nawe. Ukuba neentloni ngekhe afune ukunxibelelana ngokwasemzimbeni, kodwa ngokwenza njalo yeyona nto ilungileyo. Unokufuna ukunxibelelana nezandla zakhe kunye nezakho, ukuwola, ukudlala ngokumbetha okanye ukubetha. Ngakolunye uhlangothi, ukuba nguwe ofuna ukumchukumisa, jonga indlela asabela ngayo xa uzama, ukuba ufumana impendulo emnandi, ngokuqinisekileyo kuya kubakho ikhemistri phakathi kwaba babini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Isibini kunye nokwabelana ngesondo » Ungayixelela njani ukuba intombazana eneentloni iyakuthanda
Iindidi zebhulukhwe zamadoda
Ungazoyisa njani iingxaki emsebenzini